Ime ime kwa izu - mgbanwe nke nwa ebu n’afọ na nke nne | Ndị nne Taa
Ime ime bụ oge anwansi maka nwanyị chọrọ ịbụ nne. Ọ bụ mgbe ahụ gị malitere imepụta ndụ, mgbe okike na-enye gị ike afọ ime nwa ọhụrụ n’afọ gị.. Ime ime na-ewe ihe dịka izu 40 ma ọ bụ ezie na nke ọ bụla dị iche na nwanyị ọzọ gaa na nke ọzọ, Ọ dị mkpa ịmata ihe na-eme na kwa ọnwa atọ na kwa izu iji chọpụta ọ bụghị naanị etu aru nwanyị si agbanwe, kamakwa ihe bụ mmepe nke ẹmbrayo, mgbe ahụ nwa ebu n'afọ na n'ikpeazụ nwa, nke na-eto eto n'afọ nne .
Mgbanwe anụ ahụ nke nne na mgbanwe nwa ebu n’afọ dị ezigbo mkpa, ọ dịkwa mkpa iburu akụkụ ndị ọzọ n'uche, dịka mgbanwe mmetụta uche nke na-ada n'ihi oke ikuku nke homonụ nwanyị na-ata ahụhụ n'ime ọnwa itoolu nke afọime
Mgbe ah ị ga-enwe ike ịmata ihe bụ mgbanwe na ahụ nwanyị, na mgbanwe nke nwa n'ọdịnihu yana mgbanwe mmetụta uche nke a na-aghaghị iburu n'uche. Ga-ama ebe atọ na kwa, mgbanwe ndị na-eme n'izu ọ bụla na -eme nkeji iri ọ bụla.
Ọnwa atọ mbụ nke afọ ime
Ọnwa atọ mbụ nke afọ ime na-amalite n’izu mbụ (ụbọchị mbụ nke oge ikpeazụ) ruo na ngwụcha izu 13. may nwere ike ọ gaghị ahụ na ị ka dị ime, ọ bụ ezie n’izu ndị ikpeazụ nke ọnwa atọ a, ị ga-amalite ịchọpụta ya . N’izu ndị a, ị ga-amalite ịchọpụta mmiri nke homonụ nke ga - enyere aka dozie ahụ gị maka ndụ ọhụụ. Nwere ike ịmalite inwe ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, ike ọgwụgwụ, ụra ụra, na mgbaàmà ndị ọzọ e ji amata mgbe ihe dị ka izu nke isii gasịrị.
N’ime ọnwa atọ a, nwa ọhụrụ ga - agbanwe site na ịbụ mkpụrụ ndụ akwa akwa (zygote) ka ọ bụrụ embrayo nke na - etinye onwe ya n’ime mgbidi akpanwa gị. Ọ ga-eto ka ọ dị ka piich na sistemụ ahụ ya ga-ebido rụọ ọrụ. A ga-eme akụkụ ahụ dị iche iche, nwa ahụ ga - ebido imegharị.
Ga-ahụkwa mgbanwe na ọnwa atọ a ka ị nwere ike inwe ọgbụgbọ na agbọ agbọ. Will ga-eche na ara gị na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ karị ma nwekwa ike imerụ ahụ nke ukwuu ma ị ga-ahụ ka ha buru ibu. Nwekwara ike ịchọpụta mgbanwe mgbanwe ọnọdụ na ọtụtụ mgbaàmà ndị ọzọ ka ị na-atụrụ ime. ọganihu dị ka: obi mgbu, afọ ntachi ma ọ bụ afọ ọsịsa, ịjụ isi ma ọ bụ uto, isi ọwụwa ...
Ọtụtụ ihe ga - eme maka gị na ọnwa atọ mbụ. Fọdụ n'ime ihe mgbaàmà ndị mbụ nke afọ ime ị nwere ike ịnwe:
Izu site na izu nke Oge izizi nke afọ ime
Izu nke mbụ
Nke abụọ n'afọ nke afọ ime
Oge nke afọ abụọ nke afọ ime na-ebido n’izu nke 14 nke afọ ime wee rue na ngwụcha izu 27. Ọnọdụ afọ a nke afọ ime bụ maka ọtụtụ ụmụ nwanyị kachasị nwee obi ụtọ n’ime atọ ahụ, ebe ọ bụ na ọtụtụ ụmụ nwanyị ọgbụgbọ na ahụ erughị ala akwụsị ma pụọ. gbasiri ike karịa n'oge mbụ nke afọ ime. Womenmụ nwanyị dị ime site na ọnwa atọ a ga-enweta ọtụtụ mgbanwe dị mma. Ihe ịtụnanya na ya bụ na na ngwụcha ọnwa atọ a, a ga-ahụ afọ ime gị n'ụzọ zuru oke.
N'ime oge a, nwa gị ga-arụsi ọrụ ike ma na-etolite, ọ ga-abụ site na izu nke 18 nke afọ ime ka nwa gị ga-ebu ibu dị ka ara ọkụkọ, ọ ga-enwe ike ịmị amị, ọ ga-enwe mgbochitụ, mkpịsị aka ya ga-etolite . N’izu iri abụọ na otu ị ga - ebido inwe mmetụta nke mbụ ya na ihe dị ka izu ụka 21 obere gị ga - abụ nwa ga - amalite ibu ibu, nke mere na ọ ga - enwe ike okpukpu abụọ n’arọ ya n’izu anọ na - abịa.
N'ime oge a, a ga-enwe ụfọdụ mgbaàmà nke afọ ime nke na-adịgide n'ime gị dịka obi mgbu ma ọ bụ afọ ntachi. Na mgbakwunye na mgbaàmà nke ị maraworị ruo oge a, enwere ike inwe ndị ọhụụ n'ihi na afọ gị anaghị akwụsị ito, nakwa na homonụ ahụ adịghịkwa akwụsị ịba ụba. Fọdụ n'ime ihe mgbaàmà ndị a nwere ike ịbụ mkpọchi imi, chịngọm na-enwe mmetụta nke ọma, ọzịza nke ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ (ọbụlagodi obere), mkpịsị ụkwụ ụkwụ, dizziness, erughị ala na afọ ala na ọbụna vein
Izu kwa izu nke ọnwa abụọ nke afọ ime
Oge nke atọ nke afọ ime
Oge nke atọ na - amalite na izu nke 28 nke afọ ime wee gwụ n’izu ụka 40. Nke ahụ bụ, ọnwa atọ nke atọ sitere na ọnwa asaa ruo ọnwa iteghete nke afọ ime. Ga-amalite toghọta etu afọ gị si buo ibu. Akụkụ ahụ nwere ike ịmalite izu ole na ole tupu ma ọ bụ mgbe izu 40th nke afọ ime (50% nke ụmụ ọhụrụ na-amụkarị karịa 40th izu. N’agbanyeghi n’izu iri abụọ n’ise nke afọ ime rutere, a na-ewere ya na ọ gafeela n’ọchịchị ọ ga-abụkwa oge dọkịta ga-ekpebi iwepụta ọrụ ma ọ bụrụ na ọ maliteghị nke okike.
Nwa gị buru ibu karịa nke atọ, ọ nwere ike itu kilo abụọ na anọ (ma ọ bụ karịa n'ụfọdụ) mgbe a mụrụ ya, ọ ga-atụle n'etiti 48 na 55 cm n'oge ọmụmụ. Nwa ahụ na-eto ngwa ngwa ma nke a nwekwara ike ime ka ị nwee mmetụta nkụja na ahụ mgbu na eriri afọ gị. N’izu nke iri anọ na anọ nke afọ ime nwa ọhụrụ ahụ ga-edina n’elu afọ ya ka ọ nọrọ n’ọnọdụ ọmụmụ, Ọ gwụla ma ị nọrọ n'ọnọdụ breech, ihe nwere ike ime ka dọkịta gị dozie oge ịwa ahụ tupu ụbọchị ga-agwụ agwụ.
O yikarịrị ka n’ime ahụ gị, ị ga-ahụ ọtụtụ ọrụ, karịchaa n’ime afọ gị ị ga-ahụ ọtụtụ ọrụ nwa ebu n’afọ. I nwekwara ike na-enwe mgbanwe n’ahụ gị n’ihi etu nwa gị si buo ibu. O yikarịrị ka ị ga-enwe mmetụta dị ka: ike ọgwụgwụ, ahụ ike mgbu na karịsịa ihe mgbu afọ, obi mgbawa, Braxton Hicks contractions, varicose veins, agbatị akara, mgbu azụ, sciatica, nrọ doro anya, nkwenye, enweghị njikwa eriri afo, leaky ara colostrum, wdg.
Izu site n’izu nke Afọ Atọ nke Ime Afọ
Mgbe afọ ime na-abịakwute nwa gị ma a mụọ gị, ị ga-enwe ike izute ịhụnanya nke ndụ gị ma ị ga-amata otu izu ọ bụla ị nwetara n'oge afọ ime, nsogbu niile na-atachi obi na mgbanwe ndị ị na-ahụ n'oge niile ọnwa itoolu nke afọ ime, kwesịrị ya.